Beer brand အစုံ၊ size အစုံ ရောင်းပေးနေပါပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
Beer brand အစုံ၊ size အစုံ ရောင်းပေးနေပါပြီနော်
ICT.com.mm မှာ Beer brand အစုံ၊ size အစုံ ရောင်းပေးနေပါပြီနော်..
သူငယ်ချင်းတွေစုံရင် သောက်ဖို့ဝယ်ထားမလား? ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ရင်း အပျင်းပြေကစ်မလား? ကြက်ကြော်လေးဆွဲရင်း အအီပြေဆွဲမလား၊ ညနေခင်းအချိန်လေးမှာ တစ်နေကုန်ပင်းပန်းထားသမျှတွေဖြေဖျောက်ပြီး၊ လောကစည်းစိမ်ခံစားရင်း တစ်ဘူးတစ်လေ ချမလား? Regal Severn Larger Beer 640ml Bottles 12လုံးပါ တစ်ဖာလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲထားလိုက်တော့နော်..
ပုလင်းနဲ့ မသောက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် 24လုံးပါ Larger and Extra Larger can တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ICT.com.mm မှာ Regal seven brand အပြင်၊ Heineken, Bawdar, Tiger, ABC Extra Stout တွေလဲ ရပါသေးတယ်နော်..
ခုတော့ သောက်လိုက်ရင် လန်းဆန်းအေးမြသွားစေပြီး၊ Alcohol 5% ပဲပါဝင်တဲ့ ဒီ Regal Seven ကို အရင်ဆုံးရောင်းပေးချင်ပါတယ်။
Regal Seven Lager Beer 640ML Bottles (12 Pcs) – K15,600
Regal Seven Extra Lager Beer 500ML Cans (24 Pcs) – K26,400
Regal Seven Lager Beer 500ML Cans (24 Pcs) – K24,000
Regal Seven Lager Beer 330ML Cans (24 Pcs) – K16,800 နဲ့ ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ..
Newer Spotify က Apple Watch ကနေ သီချင်းတိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီး နားထောင်နိုင်ပြီ
Older Xiaomi Mi 10 Ultra 5G Ceramic Black (12GB/256GB) and (8GB/256GB) ဖုန်းအသစ်လေးတွေ
ဗြိတိန်တွင် ဘောလုံးပွဲများအား အရူးအမူး အားပေးကြ၍ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲမှု ပြဿနာများစွာ ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ယခုအခါတွင် စစ်တမ်းကောက်ခံမှု...